25 Amathuluzi Wezokuxhumana Awesome | Martech Zone
25 Amathuluzi Wezindaba Zomphakathi Awesome
NgoMgqibelo, Novemba 2, 2013 Douglas Karr
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi izinkundla zokuxhumana zihluke kakhulu ezinhlosweni nasezimpawu zabo. Le infographic evela kufayela le- Ingqungquthela Yamasu Ezokuxhumana Komphakathi ka-2013 iphula imikhakha kahle.
Lapho uhlela isu lenkampani yezenhlalo, inani elikhulu lamathuluzi atholakalayo ekuphathweni kwemithombo yezokuxhumana lingaba likhulu kakhulu. Sihlanganise amathuluzi amahle angama-25 okwenza ukuthi wena neqembu lakho niqale, zihlukaniswe izinhlobo ezinhlanu zamathuluzi: Ukulalela Komphakathi, Ingxoxo Yomphakathi, Ukumaketha Komphakathi, I-Social Analytics ne-Social Influencer.
Kuhle ukubona abaxhasi bethu, IMeltwater Buzz, ukufaka ohlwini lwamapulatifomu Wokulalela Komphakathi - sithola imiphumela emangalisayo kusuka kuthuluzi!
Tags: i-agora pulseama-appinionnomfundoiwashi lomkhiqizoabezindaba buddyisixukuzibandakanye nesayensibandlai-hootsuitekloutkredamanzi ancibilikai-meltwater buzzama-peekanalyticsukuposaama-shortstackumabhebhanakumane kulinganisweizibalo zomphakathiIngxoxo YomphakathiIthonya Lomphakathiukulalela komphakathiukumaketha komphakathiukukhuluma ngomphakathiabenhlaloimethmetricsspredfastfafazaihlumela emphakathiniumkhandiukushisa kwegciwane
Douglas Karr Saturday, November 2, 2013
IBunndle: Inethiwekhi Yesicelo Sokusabalalisa Seselula
i-dotMailer EasyEditor: Hudula bese Uhlela Ukuhlelwa Kwe-imeyili
Nov 4, 2013 ngo-3: 05 AM
Sawubona Douglas, ngiyabonga kakhulu ngohlu lwakho, kuyasiza impela ukuqondisa imikhakha ebanzi yemithombo yezokuxhumana I Kepha ngikhumbula kakhulu kuhlu. Yizincwadi zakudala zama-allfacebookstats. Namuhla kuyithuluzi lobuchwepheshe kakhulu. Yini enhle ngakho? Unamamethrikhi angaphezu kwekhulu wokuhlaziya i-Facebook, i-Twitter, i-YouTube ne-GooglePlus. Futhi uyakwazi ukwenza ukuhlaziywa kwakho kube ngokwakho ukuze kulingane nezidingo zakho. Kuyasiza ngempela ukuthola ukuthi yimaphi amasu akho wokumaketha aphumelela kakhulu. Kufanele uzame.
Nov 4, 2013 ngo-2: 31 PM
Ngiyabonga kakhulu ngokufaka iPostling, nayo eyingxenye yesikhulumi se-LocalVox. Siyajabula ukuba sohlwini lwakho njengeqembu eligxile engxenyeni yendawo yezokuxhumana kanye nezinselelo ezihlukile ezikulo. Sithumele lokhu kubhulogi yethu futhi siyabonga!
Nov 6, 2013 ngo-3: 27 AM
Siyabonga ngokwabelana ngale nsiza .. amathuluzi amahle owabelane ngawo ..
Nov 8, 2013 ngo-12: 35 AM
Siyabonga ngokuthunyelwe okuhle mayelana namathuluzi wezokuxhumana owabelane ngawo. esikhathini sanamuhla iminyaka inamathuluzi amaningi wokuhlaziya i-facebook, i-twitter kanye ne-google plus futhi ukwazi ukwenza ngezifiso ukuhlaziywa kwakho ukuze kulingane nezidingo zakho. Kuyasiza impela ukuthola ukuthi yimaphi amasu akho wokumaketha.
Nov 9, 2013 ngo-6: 53 AM
Usizo oluphelele luyaziswa 🙂
Aug 16, 2016 ku-8: 30 AM
Intandokazi yami yiBlog2Social. Mina ngokwami ​​ngikholelwa ukuthi iBlog2Social ingenye ye-plugin enkulu yokuthumela imidiya yezenhlalo njengoba ingekho inqubo yokufaka ohlangothini lweseva okufanele yenziwe. Ivumela umbhali weposi ukuthi aqhubekele phambili ngqo kudeshibhodi ye-Blog2Social Word-press, lapho kunikezwa khona imibhalo yokuthumela ngaphambi kokugcwaliswa. Ngemuva kokwenza ngokwezifiso imibhalo umbhali uhlela okuthunyelwe noma akushicilele ngaphandle kokulibala.